Laga bilaabo Xarunta Horumarinta Ganacsiga Ganacsiga Yaryar a
Lahaanshada shirkad ganacsi oo waxaa riyo ah ee badan oo Maraykan ah ... bilaabista ganacsi in aad ka dhabayso riyo xaqiiqo ah. Laakiin waxaa jira farqi u dhexeeya aad riyo iyo xaqiiqda in keliya oo buuxin kara la qorshayn taxaddar leh. Haddii aad ka fekereyso inaad furatid ganacsi, waa in aad biloowdid by ah ee miisaankeedu yahay faa'iidada iyo khasaaraha si aad u samayn kartaa go'aanka ah kuwa caqliga leh.
Intee in le'eg oo halis dhaqaale waxaan u qaadan karnaa?
Sidee baan ku ogaan karaa haddii ay jirto halis waa u qalantaa?
Anigu ku filan oo aqoon iyo khibrad duurka aan doortay?
Ma jiraan dalabka ku filan in la joogteeyo aan ganacsi?
Taam this geli hab nololeed?
Anigu ma waxaan ahay talo soo jeedin badan oo abaabulan?
Intee in le'eg ayey tahay in ay ku kacayaan?
Waxaan taageeri karaan qoyskayga dhaqaale ahaan marka waxaa laga yaabaa in lacag kaash ah oo gaaban?
Haddii jawaabta mid ka mid ah su'aalahan ay tahay “no,” Waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad diiradda saaraan qiimaynta iyo horumarinta is hor intaanay dacwadu.
Experience muujinaysaa in ganacsatada guul leeyihiin waxgarasho adag ee isku biimeynta cusub. Taas macnaheedu waa in ay ama kooxda maamulka ay ku shaqeeya ganacsi la mid ah ka hor, ama in ay haystaan ​​xirfadaha gaarka ah iyo xiriirada in kor loogu qaado guusha.
Ka qaybgal START UP SMART — laga bilaabo July! Isweydaarsiga aad sahamin karaan qorshahaaga fikrad iyo ganacsiga, go'aamiyo haddii ganacsi kugu habboon iyo dib u eego tallaabooyinka inuu bilaabo ganacsi yar. Haddii aad doorato in aad hore u soco, aad la xiri doona khayraadka taageero ganacsi aad qorshaha ka qaado “waxaa laga yaabaa in” in xaqiiqda.
Ma aad cilmi-baarista iyo ilaha. Booqo SBA website hagaha dhamaystiran oo kaa caawinaya in aad u diyaariso qorshe ganacsi, loo go'aamiyo haddii aad fikrad macquul tahay, aqoonsadaan su'aalaha iyo dhibaatooyinka aad la kulmi doontaa in diinta aad fikrad mid xaqiiqo ah, iyo si ay isugu diyaariyaan bilaabin ganacsigaaga.
FAAFINTA FREE: The Hagaha Bilaabidda Ganacsiga ee Minnesota waxay bixisaa ah kooban wadahadal kooban oo arrimood oo waaweyn, su'aalo iyo walaac in sida ugu badan uga keenay kuwa ka fakaraya ganacsi bilowga ah. Laga soo bilaabo Minnesota Waaxda Shaqada iyo Horumarinta Dhaqaalaha.
View iyo download daabacaadda (PDF).
Buuxi Qorshaha qabyo Business a. Si loo kordhiyo qiimaha la-talin, macaamiisha waa in uu diyaariyo qorshe ganacsi oo qabyo ah ka hor kulan uu la taliye SBDC ah. Shaki la'aan, diyaarinta qorshe ganacsi oo ku filan waa talaabada ugu muhiimsan ee laga bilaabo ganacsi cusub. Waxaa ku hanuunin bilaabay iyo maaraynta ganacsiga guul noqon doonaa. Waa inay ku jiraan dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan ganacsigaaga; waa in si wanaagsan loo qoraal ah, dhab ah oo habaysan ee isku xigxiga oo macquul ah. Waxaa intaa dheer, Si aanu ku jira wax war aan lagu taageeri karo. Foomamka qorshe ganacsi badan waxaa laga heli karaa internet-ka. Start halkan.
Marka aad si dhab ah u qiimeeyo aad gool iyo aad leedahay qorshe ganacsi oo qabyo ah,, waxa la joogaa wakhtigii inay ka jaftaa khibradda SBDC ah.
macaamiisha New waa inay buuxiyaan ah Arjiga Adeegyada oo waa ku heshiiyaan in ay ka qayb qaataan sahan loogu talagalay in la ogaado waxtarka of SBDC ah, taas oo ka caawisaa si loo hubiyo in ay maaliyad siiyaan barnaamijka.
Kulanka hore aad, taliye aad dib u eegi doona qorshahaaga ganacsi, loo ogaado wax qabad, iyo loo ogaado aagagga in kasta oo idinka mid mas'uul ka ah dhamaystirka noqon doonaa.
Our Clinics Legal for Ganacsatada waxaa loogu talagalay shaqsiyaadka leh ama waa la bilaabo ganacsi yar ee Minnesota. Waxaad heli kartaa ilaa 30 daqiiqo oo talo bilaash ah oo ku saabsan non-u dhaaranay, arrimaha sharciga ganacsiga. su'aasha A caadi ah qareenka iskaa wax u qabso ah waa maxay foomka of ganacsiga waa in aad doorato. Ballan oo kaliya. Wac SBDC ee 507-389-8875.